Qabsaawota Adamsanii Hidhuun Jeequmsa Biyyaa fi Ummanni Keessa Jiruuf Fala Hin Ta’u – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsQabsaawota Adamsanii Hidhuun Jeequmsa Biyyaa fi Ummanni Keessa Jiruuf Fala Hin Ta’u
Qabsaawota Adamsanii Hidhuun Jeequmsa Biyyaa fi Ummanni Keessa Jiruuf Fala Hin Ta’u (Ibsa ABO –Sadaasa 2, 2020)
[SBO – Sadaasa 02,2020] Duula ajjeechaa suukaneessaa fi hidhaa addatti dargaggoota irratti xiyyeeffatee deemaa jiruun cinaatti adamsuun miseensotaa fi deeggartoota ABO irratti raawwatamaa jirus hammaatuu irratti akka argamu haalli Oromiyaa keessaa ragaa gahaa dha.
Sadaasa 1, 2020 Humnoonni nageenyaa Walitti qabaa Koree Naamusaa fi To’annoo ABO kan tahan Jaal Alamaayyoo Diroo mana jireenyaa isaaniitii butanii magaalaa Buraayyuutti hidhaniiru. Jaal Alamaayyoon hayyuu fi manguddoo Oromoo hawaasa biratti jaalalaa fi kabajaa guddaa qaban, qabsoo ABOn karaa nagaatin gaggeessaa jiru keessattis Kora Sabaa ABO Waxabajjii, 2019 keessa gaggeeffame irratti Koree Naamusaa fi To’annoo dhaabichaatti filatamuudhaan dirqama isaanii nama bahataa jiranii dha. Kanatti dabalee beekumsaa fi ogummaa qabaniin lammii isaanii gargaaruudhaan nama ulfina qaban manguddoo Oromoo ti.
Tibba dabres wayta HDn ABO mana jireenyaa isaaniitti odoo haala yeroo irratti ibsa laatanuu humnoota nageenyaatin akka adda kutan taasifamanii keessummoonni isaanii ugguramanii fi hidhaman, maanguddoota saganticharra turanii fi wayta gadi bahan hidhamanii boodarra lakkifaman keessaa Obboo Alamaayyoo Diroo tokko turan.
Biyya gaaga’ma lubbuu fi manca’iinsa qabeenyaa dabalatee rakkoo siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa waliigalatti jeequmsa bifa hedduutin goolamtee lammiileef yaaddoo jireenyaa taateef furmaanni seeraan ala aangootti rarra’uu fi afaan qawweetin yakka seekaneessaan ummata jilbeeffachiisuuf yaaluu miti. Jaarmayoota siyaasaa, dhaabbilee hawaasaa fi qaamolee adda addaa waliigalattis lammiileen hundi kan keessaa qooda fudhatanii fi ittis amanan mootummaa cehumsaa gadi dhaabuu dha.
Kanaaf wiirtuu jeequmsaa taasifamuun kan itti xiyyeeffatame Oromiyaa fi lammiilee isaa hunda balaa itti aggaamamerraa baraaruuf waamicha ijaarsa Mootummaa Cehumsa Biyyaalessaa Oromiyaaf ABOn dhiyeesseef owwaachuun dirqama hundaa yeroon gaafattuu dha.